अघोरी बाबाले बिवाह गरेपछि ज्योतिषी अर्जुन क्षेत्रीकाे आपत्ति ! अघोरी बाबाको घाेर विराेध गर्दै सजाएकाे माग – Samacharpati Samacharpati अघोरी बाबाले बिवाह गरेपछि ज्योतिषी अर्जुन क्षेत्रीकाे आपत्ति ! अघोरी बाबाको घाेर विराेध गर्दै सजाएकाे माग – Samacharpati
काठमाडौँ, ९ कातिक । केहि समय अगाडी भविष्यवाणी गर्दै अपबाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका आफुलाई ज्योतिषी भन्ने अर्जुन क्षेत्रीले फेरी पनि अर्को अघोरी बाबाको टिकाटिप्पणी गरेका छन । ५८ बर्षको उमेरमा अघोरी बाबाले बिवाह गरेपछि अर्जुन क्षेत्रीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
क्षेत्रीले आँफुमा अनुहार पढेर भविष्यवाणी गर्ने शक्ती भएको बताउँदै भोलीका दिनमा आँफु फेसरिडरका रुपमा नै स्थापीत हुने कुरामा दाबी गरे । क्षेत्रीले पछिल्लो समय आफ्नो जीवनमा आएको आरोह अवरोहलाई चुनौती र संभावनाका रुपमा ग्रहण गर्दै भोलीको कदम चाल्ने बताए । हेर्नुहोस भिडियो